Guddoomiyaha Ganacsatada Somalida Bristol oo sagootin iyo soo dhoweyn u sameeyey Madaxda Somaliland ee ku sugan magaalada |
Guddoomiyaha Ganacsatada Somalida Bristol oo sagootin iyo soo dhoweyn u sameeyey Madaxda Somaliland ee ku sugan magaalada
Bristol (Gabiley.net) Waxa shalay Magaalada Bristol casuumad sagootin ah loogu sameeyey Wasiir-ku-xigeenka Qorshaynta Qaranka Mudane Kaysar Maxamed C/laahi iyo waliba soo dhoweyn Xeer Ilaaliyaha Guud ee Qaranka Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Xasan Axmed Aadan oo labaduba ku sugan magaaladan.
Casuumadan oo uu soo agaasimay Guddoomiyaha Ganacsatada Somalida ee Bristol, ahaana gudddoomiyihii hore ee dhalinyarada ee Xisbiga KULMIYE ee magaalada hadana ah xubin ka mid ah Xisbiga KULMIYE ee Bristol Mr. Maxamed Cabdi Aw Maxamed (Maxamed BBC).
Sidoo kale waxa casuumada ka soo qayb galay Aqoonyahan, Salaadiin, odayaal, ganacsato, dhallinyaro iyo waliba Musdanbeedka magaaladda Bristol.
Madashaa casuumada oo badi u badnayd is xogwaraysi iyo isku waran, iyo mid kaftaneedaba.
Ugu horeyn waxa madasha ka hadlay musdanbeedka magaalada oo ku soo dhoweeyey madaxda magaalada.
Waxa madaxdii madasha ka soo qayb gashay ay ka mahad naqeen sida wacan ee ay magaalada loogu soo dhoweeyey ayna mahad ballaadhan u hayaan.
Waxa isaguna madasha ka hadlay suldaan ka mid ah salaadiinta Bristol Suldaan Mahdi oo si kaftan leh u yidhi “Qofku hadduu xanuusado duljoogaa u dawo ah, Madaxdana agjoogaa u wanaagsan” markaa in aan ka soo qayb galo casuumadan aad bay sharaf weyn iigu tahay.
Ugu danbayna waxa madasha ka hadlay masuulkii casuumad bixiyey oo aad uga mahad naqay sida wanaagsan ee madaxdu u soo ajiibeen casuumad iyo wakhtigooda qaaliga ah ee ay siiyeen, aadna ugu farxay is xogwaraysigan.